ORANGE: Hanatsara sehatry fifandraisana ny Smart Nosy Be sy ny « réseau 4G ». | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE ORANGE: Hanatsara sehatry fifandraisana ny Smart Nosy Be sy ny « réseau 4G ».
ORANGE: Hanatsara sehatry fifandraisana ny Smart Nosy Be sy ny « réseau 4G ».
By Nirinajuil 10, 2017, 05:37 0
Voasokajy ho Nosy Afrikana fahatelo tsara indrindra i Nosy Be. Miroborobo fatratra ny sehatry ny fizahan-tany amin’io toerana io satria mpizahan-tany 75.000 isan-taona no tonga mitsidika ny tora-pasika, ny vala-java-boahary sy foto-drafitra asa mampiavaka azy. Ho fanatsarana hatrany ny sehatry ny fizahan-tany sy ny asa fiveloman’ny mponina, teraka ny fiarahamiasa eo Ministeran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra, ny Ofisim-paritry ny fizahan-tany Nosy Be sy ny orinasa Orange. Hiparitaka manerana an’ity Nosy ity ny « réseau 4G ».
Nambaran’ny Michel Degland, manatsara ny fomba fiasa na eo amin’ny asa fivelomana na asam-panjakana ny kalitaon’ny nomerika ampiasaina. Vao maika mampisokatra ny orinasa amin’ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny fampiasana « réseau » matanjaka. Nanamafy izany ihany koa ny Ministra André Neypatraiky Rakotomamonjy fa andry lehibe ho an’ny fampiroboroboana ny fifandraisana ny fisian’ny 4G.
Ankoatra izany, nitondra ny anjara birikiny, Smart Nosy Be, ho fanamorana ny fampiasana ny teknolojia sy ahafahan’ny daholobe sy ny tomponandraikim-panjakana misitraka ny vaovao ihany koa ny Orange. Tamin’ny alalan’ny fanomezana tolotra « internet ». Tanjona amin’izany ny fanavaozana ny raharaham-panjakana, ny fahafahan’ny rehetra amin’ny resaka nomerika…
Ny 7 sy ny 8 Jolay 2017 teo no notanterahina tany Nosy Be ny fifanaovan-tsonia manamarika ny fiarahamiasan’ny Orange sy ny Ministera ary ny ofisim-paritra.
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/Nosy-Be-4-1.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/Nosy-Be-4-1.jpg »] ORANGE [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/Nosy-Be-5-1.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/Nosy-Be-5-1.jpg »] ORANGE [/image_slider]
[image_slider link= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/Nosy-Be-7-1.jpg » source= »http://www.canalnews.net/wp-content/uploads/2017/07/Nosy-Be-7-1.jpg »] ORANGE [/image_slider]
Previous PostFMI MALAGASY: Iray volana monja, hanana fahefa-mividy ny vahoaka Malagasy. Next PostSOAMAHAMANINA: Atao fitaovana politika.